Manitsaka ny tany sinoa i Realme: tsy ho ela dia hanitatra ny faravodilanitra | Androidsis
Realme nanao ny laharam-pahamehana tamin'ny taona lasa ho toy ny marika kely an'ny Oppo. Na izany aza, tao anatin'ny roa volana dia nisaraka tamin'ny orinasa Oppo ny ray aman-dreniny mba ho lasa marika mahaleo tena, como el Redman. Nanomboka teo dia nifantoka tamin'ny tsena indiana izy, toy ny hatramin'ny nanombohany, fa nanitatra ny fisiany tamin'ny faritra hafa koa.
Na eo aza izany, Realme dia nijanona lavitra ny tsenan'ny smartphone lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, dia i Sina. Saingy hiova izany, satria toa izany vonona ny hiditra amin'ny tsena sinoa ny orinasa. Raha ny marina, nandeha mivantana ihany koa ny pejy Weibo an'ny marika.
Ny pejy Weibo an'ny Realme dia tsy mampiseho na inona na inona momba ny drafitra any ShinaSaingy ny zava-misy fa efa mivantana dia manondro fa ny famoahana Realme ho an'ny firenena be mponina indrindra eto an-tany dia efa ho avy tsy ho ela. Antenaina hiditra amin'ny tsena Afovoany Atsinanana sy Eropa ihany koa ity orinasa ity amin'ity taona ity.
Sary famantarana Realme
Amin'izao fotoana izao, ny marika Realme dia misy fanatontosana any amin'ny firenena fito, ao anatin'izany i India, Vietnam, Malezia, Indonezia, Thailand, Egypt, ary Filipina. Na izany aza, nanomboka nampiditra an'i China tao amin'ny tranonkalany i Taiwan ary koa Taiwan.
Misaotra ny repertoire an'ny finday avo lenta, nahavita fahombiazana mbola tsy nisy toa azy tany India. Tao anatin'ny herintaona monja nanombohany, nahatratra 8% ny anjaran'ny tsenan'ny smartphone any an-toerana ny orinasa.
Raha mbola ao ambadiky ny lavitra indrindra an'i Redmi mpifaninana aminy any India izy, Realme dia nitombo haingana tamin'ny naha-mpanamboatra finday azy ary ny tolotra fampitaovana ao aminy ihany koa dia miteraka fandrahonana lehibe ho an'ny tsipika Xiaomi Redmi ao amin'ny firenena goavambe.
Realme C2: Ny haavon'ny fidirana vaovao an'ny marika
Ary farany, na dia mbola tsy nanamarina na inona na inona tamin'ny fomba ofisialy aza ilay orinasa, dia toa izany el Realme 3 Pro mety ho anisan'ireo finday avo lenta voalohany misy any Sina rehefa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fidirany ao amin'io faritra io ny marika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Manitsaka ny tany sinoa i Realme: tsy ho ela dia hanitatra ny faravodilanitra izy
Ny Meizu 16s dia efa zava-misy. Lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra